Ma Taqaan Curiyaha Aadamaha Dulleeya?!By: Cabdinaasir Axmed Ibraahim -
Thursday August, 16 2018 - 02:21:08
Thursday January 28, 2016 - 08:26:02 in by
Mar kasta oo baahiyahaaga aad dabarto, isla markaa, aad yarayso, waxa sare u kacaya sharafka iyo maamuuska aad ummadda ku dhex leedahay.
117 ka curiye, walow, la sheegayo in ay ka ba badan yihiin, hadana curiyaha ugu dhibka badan Aadamaha sharafta na ka qaaday, in la fahmo waxa aan u arkay in ay mudan tahay.Murti maanseedda Soomaliyeed ee tidhaa, Gobonimana waa quus, haddii quud la dhaafsado! Ayaa waxbadan isku fuuqsanaysa, hasa yeeshee, laga yaabee in qoraalka hoose aad wax uun ka dheefto.
Mar kasta oo baahiyahaaga aad dabarto, isla markaa, aad yarayso, waxa sare u kacaya sharafka iyo maamuuska aad ummadda ku dhex leedahay. Waxa aad ka dhowrsanaysaa baryada Aadamaha oo ah hogga ugu weyn ee liidnimada iyo maamuus darrada ee Ina Aadan ku dhaco inta uu ifka joogo.
Haddaad rabto In aad guul sharaf huwan gaadho iska jir jeceylka curiyaha sumaddiisa loo soo gaabiyo ( Ag) Marka la kooxaynayo curiyeyaasha Sayniskana, wuxuu curiyahanni galayaa "kooxda 11aad," tirada cufnaanta atomkiisu waa (107.8682) . Silver taariikh yahannadu waxa ay sheegayaan in Aadmigu illaa 5000 oo sanno ka hor adeegsan jiray Maarta oo ah curiyaha lacagta laga dhaliyo.
1.Waa curiye dad badan rumaysan yihiin in aanay la’aantii noolaan karayn.
2.Curiyahan dartii guryo badan ayaa u burbura, rag iyo dumar badanna way u kala tageen.
3.Curiyahanni tiro aan rasmi ahaan loo garanayn ayaa awgii diintii ay haysteen uga baxay.
4.Waa curiye dartii maalintii Malyuumaad dad ahi u sharaf dhacaan.
5.Waa curiye mirirkasta xabsiga ay u galaan dad aan tiro lahayn.
6.Waa curiye dad badanni dartii isku dilaan ilbidhiqsigiiba.
7.Waa curiye cawrooyin baahanni sharaftooda gabadhnimo ku waayaan baahidiisa.
8.Waa curiye awgii uu Aadame Rabbi maamuusay madaxiisa hoos ugu dhigo, cid aan istaahillin in laga foorarsado.
9.Waa curiye haddii kalgacalkiisu ku madax maro, sharaftaada, sharafta gabadhaada, sharafta xaaskaaga intaba aad ku beddellanayso.
10.Waa curiye kalgacalkiisu idin kala fogaynayo adiga iyo Rabbigii ku abuurtay iyo adiga iyo Addoomaha.
Waa curiyaha lacagta laga sameeyo. Dad badan ayaa gunnimo ku beddeshay lacag oo kabo qaad iyo kabo qaniin noqday.Markii magaalooyinka loo soo guurayna lacagta ayaa wax walba noqotay. Hasa yeeshee, dhaqankeennu muxuu ka yidhi, gaar ahaan abwaannadeenu.
Abwaan Maxamed Ibraahim Warsame Hadraaw wuxuu ka yidhi;
Dadka ruux sabooloo,
Saran seer ku raagiyo,
Guryo samo mid yaaloo,
Sidgo dhalay ku maaloo,
Helay seerma weydiyo,
Laba kala sed roon baa,
Subax nool ba joogta.
Abwaan Axmed Saleebaan bidde isna wuxuu ka yidhi;
Waa laac adduunyadu,
Labadii walaalo ah,
Midba maalin liitoo,
Ruuxii u liil gala,
Luggooyadu ma daysee,
Xasan Xaaji Cabdilaahi Ganay wuxuu yidhi;
Xalayta ba cawayskii
Cimidh bay ahaayeen
Caawana lagu ma oga
Wakhtigii ku ciiliyo
Way is daba carraabaan,
Waxaana kuu caddayn kara,
Caamiyaha inadhaha liyo
Ma og tahay curyaan kaba
Cago looma waayine
Caynkaa wax loo yidhi
Kuwa cararayee ladan
In ay ku cimro qaataan!
Rabbi naxariistii janno ha ka dhargiyee, abwaan Ibraahim Gadhle, isna wuxuu ku maansooday.
Wakhtigu waa is daba socdaa,
Adigoo degganaa abaar,
Marbuu dirrir kuu curtaayoo,
Daruuruhu kuu da’aanood,
Xareed ku dabaalaataa,
… Adoo dayr adag dhistaa,
Ilaahay kaa dunshaa!
Markale Abwaan Xasan Xaaji Cabdilaahi, wuxuu lahaa;
Wakhtigaa qof saacida
Midna waayahaa xidha,
Labadaasi waxaan ahayn,
Horaa looga waayoo,
Waa nin iyo waagii.
Cabdinaasir Axmed Ibraahim; Rabbow kugu mahad. Goor aan sidaa u durugsanayn ayaad I kala fahan siisay faraqa u dhexeeya arsaaqadda iyo calafka.
Waxa aad jabtay oo aad nolosha ka dhacday marka miisaanka aad dadka ku qiimaysaa lacag ka samaysnaado, muraayadda aad dadka ku eegtaana ama ku qiimaynaysaana ay iyana lacag ka samaysnaato. Waxa aad u noolaan doontaa lacag darteed, isla iyada darteed ayaad u dhiman doontaa.
Mid ka mid ah dadkii ka xoroobay boqortoonyada liidnimada iyo hoosaynta ee lacagtu maamusho markii dammiirkiisa la baayacay, waxa uu yidhi;
Qarafiyo tixaha gabay,
Ku qadhaabo uma baran,
Hadba wiilka qooqee,
Maalintaasi qoodha ah,
Qushuuciisa ma akhriyo,
Waa iskala qab weynahay,
Qofna kabaha uma tiro.
Qalinkii :Abdinasser Ibraahim
Caynaba:-Siyaasi Axmed Cali Ubaxle Oo Dhaliilo Culus Ku Hurgufay Maamulka Gobolka Saraar Iyo Arimo Xasaasiya Oo Uu Ka Hadlay.
12/08/2018 - 16:18:23
Hargeisa:-Maxaa Imaatinka Axmed Siilaanyo Ku Soo Beegay Eedaymihii Musuq Maasuq Ee Tunka Loo Saaray Wasiiradiisii Awooda Badnaa.
03/08/2018 - 10:40:42
Hargeisa:-Siyaasi Axmed Xaaji Daahir Oo ka Jawaabay Eedihii Uga Yimi G-Ilaalinta Hantida Qaranka.
01/08/2018 - 15:50:28
Gudaha:-Axmed Cali Garas Muxuu ka yidhi Dayax Maddoobaadkii ugu mudadda dheerraa qarnigan.
30/07/2018 - 18:10:37
Hargeisa:-Rooda Axmed Yaasiin Oo Ka Hadashay Sida Ay U Galayaan Xaruntooda Xuquuqul Insaanku.
30/07/2018 - 13:24:51
Burco: Daawo Muusigiistaha caanka ah ee Maxmed Bulshaawi oo si layaableh loogu soo dhoweeyey Burco
28/07/2018 - 17:57:10
Gudaha:-Xildhibaan Axmed Xuseen Golaha Deeganka Ee Degmada Lug Haya Ayaa Eedihii Ugu Cuslaa U Soo Jeediyay Xisbiga Waddani.
27/07/2018 - 16:35:39
Hargeisa:-Maxaa Ka Jira In Pro Axmed Ismaacil Samatar Uu Wasiir Ka Noqonaayo Xukuumada Muuse Biixi.
25/07/2018 - 09:08:46